Shiinaha Xirfadleyaal 24 koob oo keeg ah keegga dubista koob keega oo wata shahaadada CE Warshadda iyo Soosaarayaasha | Dubo
Xirfadleyaal 24 koob oo keeg ah keegga dubista koob keega oo wata shahaadada CE
budada alwaaxadda sifaynta alwaaxdu aan lagu dhejinayn
24 koob oo keega dubista mooska dubista
Dhoofinta qulqulka waxay soo saartaa caadada 24 koob oo keega dubista rootida dubista. Dhammaan 24 koob oo keega dubista rootida dubista qoob-ka-ciyaarka waxaa laga sameeyay alaabada ganacsiga, oo lagu sharraxay cabbirro kala duwan iyo habeynno si loo buuxiyo baahiyahaaga dubitaanka, oo waxay kuxiran yihiin faahfaahintaada.
Faahfaahinta xajmiga ee tixraaca: loogu talagalay 24 koob oo keega dubista koobka keega dubista
Nambarka Alaabada Faahfaahin Faahfaahinta
Qalabka: ee 24 koob oo keega dubista mooska dubista
Taariikhda QC: 24 koob oo keega dubista rootida dubista
Warshadda Wuxi Bakeware Fighter waa soo saare hormuud ah isla markaana keenaysa alaabada rootida tayada leh, oo la aasaasay bishii Maarso 2003. Waxaan shaqeynaa 14000 m 2 aqoon isweydaarsi, tas-hiilaad aad u fiican, geedi socod soo saar horumarsan iyo koox aad u fiican oo R&D ah. Warshaddeenna hadda waxay soo saartaa ku dhawaad ​​1000 nooc oo keeg ah, oo si joogto ah u cusbooneysiisa naqshadaha wax soo saarka iyo soo saarista mustaqbalka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee soosaarka waxaa ka mid ah saxannada dubista, digsiga rooti, ​​digsiga Pizza, caaryada buskudka, buskudyada, hilqado, iwm. Waxaan ku faanaa shirkad noo gaar ah "Qulqulka", oo la abuuray isla sannaddii aasaaska shirkaddayada. Iyadoo leh tayo heer sare ah iyo gaarsiin waqtigeedii, Warshadda Wuxi Bakeware waxay abuurtay muuqaal sumcad iyo isku hallayn karo dhoofinta, taasoo noqoneysa fure muhiim u ah iibkeenna Iibka suuqa maxalliga ah ee shirkadda ayaa horeyba u faafiyey Shiinaha oo dhan, iyada oo ganacsigayaga caalamiga ahi uu si dhakhso leh u sii fidayo. Waxaan sidoo kale aqoonsannahay muhimadda kalsoonida macaamiisha waxaanan ku dhiirigelineynaa dhammaan shaqaalaha inay u adeegaan macaamiisha sida ugu wanaagsan ee ay kartidooda u leeyihiin. Ugu dambeyntii waxaan higsaneynaa inaan ku sii wadno isku-halaynta xirfadleyda dhammaan alaabooyinka iyo adeegyadeena aadka u wanaagsan.
Hore: Weel caaga ah oo aan caag lahayn oo caag ah oo laga sameeyay Shiinaha
Xiga: Dufan fara badan oo baguette / faran dubista rootida dubista
Iibinta kulul oo qaab bedbaado leh oo ammaan ah
Naqshad sameeye cusub oo jumlo dabacsan
Nooca cusub ee bijiska lagu shubo ee bijiska ah
Bakhaaro dubitaan oo xirfad leh FDA oo lagu oggolaaday CE ...
Xirfadlayda dubista ee ganacsiga dubista / dubista ...
Samee saxaarad dubista cusub oo tayo sare leh